C/raxmaan Cirro "Muuse Biixi waxa uu Somaliland ku hoggaamiyey colaad" - Caasimada Online
Home Warar C/raxmaan Cirro “Muuse Biixi waxa uu Somaliland ku hoggaamiyey colaad”
C/raxmaan Cirro “Muuse Biixi waxa uu Somaliland ku hoggaamiyey colaad”
Hargeysa(Caasimada Online) – Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Somaliland ee Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa shaaca ka qaaday inuu fashil kusii si qaayo Hogaamiyaha Somaliland Muuse Biixi.
Cirro, ayaa sheegay in Muuse Biixi uu saaxada Somaliland lasoo galay colaad abuur waxa uuna ku baaqay inuu ka fiirsado talaabooyinka uu qaadayo.
Guddoomiye Cirro, waxa uu tilmaamay in waayadaani ay la fajacsanaayen go’aanka uu maamulka talada hayo ilaha dhaqaale ugu gacan galiyay Dowlada Imaaraadka, iyadoo taa ay iminka usii raacday in dhalinyarada dhiigooda lagu daadiyo dagaal.
Maamulka uu horboodayo Muuse Biixi ayuu sheegay inaanu laheyn muuqaal dhameysankara mudada uga harsan wakhtiga, sababo la xiriira ad adeeg iyo in culeysyo aan horay u jirin lasaaro shacabka oo marba mid la dhigaayo Jeelka.
“Anigu waxa muuqda un’baan sheegayaa waxaan oran lahaa Biixi haka shaqeeyo danaha guud, Somaliland uma baahna colaad iyo in ilaha dhaqaale la hoos geeyo dalal shisheeye”
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Somaliland ee Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay inaanu arag latashiyada maamulka Muuse Biixi, waxa uuna cadeeyay in xiligan Somaliland ay u baahan tahay keliya in masiirka lagala tashto waxgaradka.
Sidoo kale, Cirro ayaa ku taliyay in maamulka Muuse Biixi uu la imaado isbedel dhanka habdhaqanka ah, waxa uuna carab dhabay inaanu awood lagu maamuli Karin Somaliland.
Haddalka Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Somaliland ee Waddani Cabdiraxmaan Cirro, ayaa kusoo beegmaaya iyadoo maamulka Somaliland uu dagaal kula jiro maamulka Puntland, halka waxgaradka deegaanada Somaliland loo xiro xoriyatul qoolka.